Samsung Galaxy J5 (2017) na-enweta mmelite gam akporo | Gam akporosis
Ọ bụzi obere ịhụ A gam akporo na-agba ọsọ na smartphones dị ka ọ dị na mbụ. Ọ bụghị naanị na ihe niile dị elu na-atọ ya ụtọ, mana enwekwara ọtụtụ ngwaọrụ dị n'etiti, yana ụfọdụ ngwaọrụ ndị dị ala, nwere uru niile nke OS a, nke ga-anata onye ga-anọchi ya n'oge na-adịghị anya. gam akporo 10.
A naghị echekwa ọdụ ochie ahụ ka ọ bụrụ onye ruru eru inweta Android Pie. Nke a bụ ihe gbasara Samsung Galaxy J5 na 2017, mobile dị afọ abụọ dị obere, dị ka aha aha ya na-egosi, nke na-anata ya ugbu a site na nwelite OTA nke na-agbasa nke nta nke nta.
Ndị ọrụ nke Galaxy J5 (2017) ndị na-enweta mmelite na gam akporo Pie bụ ndị si Russia. Ndị si mba na mpaghara ndị ọzọ ka na-eche ya. Yabụ ọ bụrụ na ị bụ onye nwe ekwentị a, ị ga-ahụ na enweghị ọkwa nke ngwugwu ngwa ngwa ọhụrụ ahụ, nke, na mgbakwunye na ịgbakwunye ọhụụ ọhụrụ, na-abịa na nhazi nke akwa mkpuchi otu Samsung One UI nke ụlọ ọrụ South Korea. ... Nwere ike ịlele ma ọ bụrụ na ị nweelarịrị ya site na itinye menu Nhazi > Mmelite ngwanrọ.
N'aka nke ọzọ, ndị ọhụrụ nche kwachie dịkwa ugbu a na ngwanrọ software, yabụ ọnụ ahụ na-enwetakwa ihe nchebe kachasị ọhụrụ nke na-eme ka ọ ghara ịdaba na ngwa egwu na-emerụ ahụ.
Cheta nke ahụ Ngwaọrụ a na - eji ihuenyo Super AMOLED nke 5.2 nke anụ ọhịa mee ihe na mkpebi HD nke pikselụ 1,280 x 720, nke na - eme ka ọ bụrụ akụkụ 16: 9. N’aka nke ya, ọ na-ebu Exynos 7870 processor na obi ya, yana ebe nchekwa 2 GB Ram, ebe nchekwa nchekwa 16 GB nwere nkwado maka mmụba site na microSD na batrị 3,000 mAh.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy J5 (2017) na-enweta mmelite gam akporo na Samsung One UI
Ejikwa ịnyịnya ígwè ịnyịnya ígwè gị na gravity Rider Zero ka ị nwee ike ịlụ ọgụ megide ndị egwuregwu ndị ọzọ